कम पढेका व्यक्तिहरू किन राजनीतिमा लाग्छन् ? - अब हाम्रो पालो - प्रकाशितः आश्विन २, २०७५ - साप्ताहिक
पढेलेखेकाहरूजति अस्ट्ेरलिया–अमेरिका भासिन्छन् । बचेखुचेकाहरू विज्ञान र म्यानेजमेन्टतिर अल्झिन्छन् । अनि को लागोस् त राजनीतिमा ?
धेरै पढेकाहरू घमन्ड देखाउँछन् । त्यही भएर हो कि ?
यो प्रश्न त सीधा प्रधानमन्त्रीसँग सोध्नुपर्ने ।
रमन एस कार्की
दादागिरी देखाउन र भ्रष्टाचार गर्न ।
पढेलेखेकाहरू त सहमति, छलफल अनि सहकार्यमा जान्छन्, त्यसपछि झगडा हुँदै हँुदैन तर राजनीतिमा झगडा–विवाद आदि भएन भने राजनीतिको के अस्तित्व भयो र ?
नपढेका मानिस राजनीतिमा लाग्नुको कारण हो :
१. पढेकाले भन्दा धेरै तनखा पाउनु
२. पढेकाले भन्दा बढी मान–मनितो पाउनु
३. शरीरलाई पर्याप्त मात्रामा आराम दिन पाउनु
४. आफूसँग पैसा नभए पनि करोडको कारमा घुम्न पाउनु ।
राजनीतिमा जनतालाई लुटेर जम्मा गरेको पैसाले ऐस–आरामको जिन्दगी बिताउन पाइन्छ । यहाँ न कानुन लाग्छ न त कसैको डर नै छ अनि किन पढ्नु पर्‍यो र ?
किनभने राजनीति गर्न कुनै शैक्षिक योग्यता चाहिँदैन ।
फुर्सदिला हुन्छन् । उनीहरू व्यवहारिक राजनीतिमा अब्बल हुन्छन्, न कि कोर्सको कुरामा ।
पढेलेखेका व्यक्तिलाई आफूभन्दा तल राख्न ।
अशिक्षित, बेरोजगार अनि नराम्रो छवि भएका व्यक्तिहरू ले गर्ने भनेको राजनीति, चम्चागिरी, दादागिरी आदि नै हो शिक्षितहरूका लागि खाडी छँदैछ नि ।
पढेकाहरू पढेका पढै हुन्छन् । नपढेकाहरूको हातमा काम हुँदैन, त्यसैले राजनीतिमा लाग्छन् ।
ठूलाबडाको संगत भएर होला ।
पढेका मानिसभन्दा ठूलो बन्न ।
राजनीति आफैंमा कम पढ्नेहरूको उच्च शिक्षा हो ।
अन्यत्र जागिर नपाएर ।
अरू काम नभएर ।
खाने बाटो गर्नु परेन ? नत्र के खाएर बाँच्छन् त ?
सात पुस्ताका लागि पुग्ने धन सजिलै कमाउन ।
नपढेको व्यक्तिको बाहुल्य भएको हो, तर कम पढेका व्यक्ति मात्र राजनीतिमा लाग्छन् भन्न मिल्दैन, अहिले राजनीतिमा बौद्धिक वर्गको पनि राम्रै उपस्थिति छ ।
पढेलेखेका मानिस राजनीतिमा आउँदैनन्, त्यसैले नपढेकाहरूले राजनीति गर्छन् ।
विगतको इतिहास नेता भनेको विद्रोह गर्न सक्ने, जेल–नेल जान सक्ने, भत्काउन सक्ने हुन्थ्यो । आज राजनीतिमा अर्को पुस्ता तयार नहुँदा तिनै पात्रको हालिमुहाली छ, जसले पढ्न पाएनन् । पढेलेखेका मानिसहरू राजनीतिमा सक्रिय नहुने कारण राजनीतिमा लागेपछि पढाइ छोड्नु पनि हो ।
रवि किरान हमाल
पढाइ नै ठूलो कुरा होइन, दिमाग खुस्किएकाहरू पनि राजनीतिमा लागेर पो आपत छ त यहाँ ।
निश्चित शैक्षिक आधार नभए पनि गफ लाएरै पुग्ने भएकाले ।
किनभने पद पाउन लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिनुपर्दैन । बरु नियुक्ति दिन बसेकाहरूलाई नै उल्टो आफैंले नियुक्ति दिन पाइन्छ ।
के असल नेतृत्व गर्न शिक्षाकै आवश्यकता छ ?
एयरपोर्टमा सामान ल्याउन गरिएको कडाइ कस्तो लाग्यो ? फाल्गुन २०, २०७५
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कस्तो लाग्यो ? फाल्गुन ११, २०७५
पाकिस्तानमा सिस्टर्स डे मनाउन जारी गरिएको उर्दी तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? माघ २९, २०७५
विवेकशील साझा पार्टी फुट्नुको कारण के होला ? माघ १४, २०७५
के यो डा. गोविन्द केसीको अन्तिम अनशन होला ? माघ ६, २०७५